Daawo muuqaalka: Madaxweynaha maamulka Somaliland oo maanta kicitimay dalka Turkiga oo uu Kaga qayb galayo Wada Hadallada Somalia Iyo mamulka somaliland. |
Daawo muuqaalka: Madaxweynaha maamulka Somaliland oo maanta kicitimay dalka Turkiga oo uu Kaga qayb galayo Wada Hadallada Somalia Iyo mamulka somaliland.
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo wefti heer qaran ah oo uu Hoggaaminayay ayaa maanta socdaal ugu kicitimay dalka Turkiga, halkaasi oo ay kaga qeyb galayaan wada hadalo fool-ka fool ah oo ay la yeelan doonaan dawladda Federaalka ee Soomaaliya oo ay marti-gelisay ama gogoshiisa dhigtay xukuumadda Turkigu.
Madaxweynaha Somaliland oo waxyar ka hor intii aanay u kicitimin Turkiga qolka nasashada ee madaarka Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa tafaasiil ka bixiyay socdaalkiisa, waxaanu yidhi “Waxaanu maanta u baxaynaa dalka Turkiga oo la noogu martiqaaday wada hadal u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya, inaga siyaasadeenu waxay ahayd goor walba, mar kasta in meeshii danta Somaliland lagaga hadlayo ee danta iyo maslaxadu noo tilmaantana waanu tagaynaa. Way jireen wada-hadalo badan oo aynu ka qayb-galnay, meelo aynu ka gows qabsanayna way jiraan sababo ah inay inoo cuntami waayeen.”
Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Markaa halkaasi ayaanu tagaynaa waxaana inoo furmaya wada hadaladii, madax badan oo raysal-baarlamaanku ka mid yahayna waanu ku tagaynaa iyo masuuliyiinta axsaabtu. Waxaanu rajaynaynaa inaanu halkaa wixii qadiyadeena ah gaadhsiino oo aanu dunida gaadhsiino, inaynu shirarkan tagnaana danteena ayaa ku jirta.”
Halkaan hoose ka daawo warbixintaani oo dhan